TAMAANDHADA "CAANO-KULAYLKA SONKORTA": SHARAXAAD, ASTAAMAHA, TALOOYINKA SOO KORDHAYA EE DAAQADAHA, SAWIRRADA YAANYADA - BEER CAGAARAN
Mucjiso macaan on windowsill aad - sharaxaad iyo dabeecadaha kala duwan ee tamaandhada ah "Cunuggu ee Sahara"
Xilliga Casriga ah ee Sahara - noocyo xiiso leh ee bannaanka u mahadcelin dhadhan dhalaalaya midhaha, iyo sidoo kale muuqaalka xarrago dhirta.
Daaqsi la isku daro leh cagaar cagaaran, oo la daboolay rucubyo yaanyo casaan ah, u muuqda kuwo aad u qurux badan, had iyo jeer soo jiidashada dareenka. Dhirta waxaa lagu beeray dherado ballaaran, qurxinta verandas, balakoonada, iyo loggias.
Akhri wax dheeraad ah maqaalkeenna ku saabsan beerista yaanyada Tacliinta sonkorta: sharaxaada kala duwan, sifooyinka, gaar ahaan farsamooyinka beeraha.
Tacliim Cranberry Tamaandhow: sharaxaad kala duwan
Magaca dugsiga Mucjisyada sonkorta
Bisaylka illaa 80 maalmood
Foomka Miraha waa wareegsan, siman
Cunto dhexdhexaad ah 15 garaam
Codsiga Salad, dhar xidhashada
Noocyo dhaadheer ilaa 3 kg mitir labajibbaaran
Noocyada sii kordhaya Qiyaasta Agrotechnika. Waxaa lagu kori karaa balakoonka
Cadaadiska cudurada Iska daaweyn cudurada waaweyn ee Solanaceae
Waxyaabaha kala duwan ayaa waxaa lagu qurxiyey jadeecada Ruushka, ku haboon beerashada lagu koriyo, lagu koriyo, filimka hoostiisa, weelasha ama ubaxyada. Dhirta iswada leh waxaa lagu dhejin karaa balakoonka ama daaqadaha.
The kala duwan yar yar-fruited asalka ah, sare-dhalid, bislaado hore.
Bush waa go'aan qaadasho, iswaafajin, heerar. Ku saabsan fasalada aan caddayn ee halkan ka akhriso. Dhismaha mass cagaaran waa dhexdhexaad ah, caleemaha yar yihiin, cagaar madow. Miraha waxay u bislaadaan si fiican, rucubyo badan. Wax-soo-saarka ayaa wanaagsan. Guryaha lagu koriyo ama lagu koriyo waxay suurtogal u tahay inay helaan 2.6-2.8 kg oo yaanyo ah oo ka kooban 1 mitir oo laba jibbaaran. m.
Mucjisyada sonkorta qiyaastii 3 kg mitir labajibbaaran
mid aad u qurux badan, midabyo qurux badan;
baadiyaha is haysta uma baahna qanjaruufo iyo xirashada si ay u taageeraan;
hoos u dhigista daryeelka.
Kala duwanaantu waxay ku dhawyihiin wax cillado ah. Yield waxay kordhisaa quudinta si taxadar leh iyo u fiirsashada shuruucda waraabinta.
Akhriso boggayaga internetka: Sida loo diyaariyo ciidda aqalka dhirta lagu koriyo xilliga gu'ga? Waa maxay noocyada ciidda ee yaanyada ah? Waa maxay carrada ku habboon geedo sii kordhaya iyo dhirta qaangaarka ah ee lagu koriyo?
Iyo sida loo helo goosashada wanaagsan ee berrinka bannaan? Sidee u kobcin yaanyada oo dhan wareega lagu koriyo? Maxay yihiin waxyaalaha ugu xun ee la shaqeynaya noocyada hore ee qiimaha leh?
Miraha waa yar yihiin, miisaamaya ilaa 15 g.
Wareegay, siman, oo leh xoogaa fiiqan oo muuqaal ah.
Bannaanida yaanyada ayaa midabkeedu ka beddelaa cagaar iftiin leh ilaa casaan.
Dhadhan dhadhan leh, macaan oo leh macaan yar.
Chambers yar yihiin, saxarka waa cufan, casiir leh, iyada oo aan biyo ka.
Maqaarku waa mid dhalaalaya, cufan, laakiin maaha mid adag.
Mucjisyada sonkorta 15
Miraha waxay ku habboon yihiin caanaha, la karkariyey ama yaanyo cusbayn oo aad u fiican bangiyada. Ma ayan jabin, ku haboon xayawaanka dhirta kala duwan. Tamaandhada waxaa la cuni karaa cusbada cusub, kariyo noocyo cunto fudud ama cunto fudud. Miro wareegsan oo yar ayaa aad loogu jecel yahay carruurta.
Waxaad arki kartaa midhaha kala duwan ee tamaandhada ah "Cranberries in sonkorta" iyo geedi socodka iyaga oo ku koraya balakoonka ee sawirka:
Sida hore loo soo sheegay, waxaad xitaa kori kartaa yaanyo kuwan balakoonka. Tiknoolojiga beeraha ayaa isku mid noqon doona. Dhirta geedisocodka habka rassadnym. Seeds lagu beeray Maarso, ka hor inta aan la beeriin waxaa lagula talinayaa inay ku qoyaan kiciyaha kobaca 10-12 saacadood.
Talo: Ciidda yaanyada waa inay noqotaa iftiin iyo nafaqo leh. Xulashada ugu wanaagsan - isku dar ah dalagga cawska leh humus iyo qadar yar oo caano ah oo la dhaqay.
Seeds waxaa lagu beeray xoogaa yar, oo la rusheeyey lakabka peat ah iyo lagu buufiyo biyo diirran oo dhalada ka soo baxaya. Si aad u hesho biqilka guul, waxaa muhiim ah in lagu hayo heerkul deggan (23-25 ​​digrii).
Ka dib markii la dhalaalayo, weelasha waxaa lagu dhejiyaa nalalka dhaadheer ama iftiinka qorraxda. In wajiga of formation of caleemaha ugu horeysay ee dhab ah geedo ku qufulo dheriyo yar oo kala duwan. Qalitaanka ka dib, geedo waxaa lagu quudin karaa bacriminta oo buuxa.
Geedaha dhirta dhalinyarada ah ee deganaanshaha rasmiga ah ayaa suurogal ah bilawga May. Xayawaanka ayaa si fiican loo furfuray, iyo superfosphate iyo ash xaabada ayaa lagu daraa ceelasha marka la beeray.
Kaabashka daaqa uma baahna, hawo wanaagsan, waxaad ka saari kartaa caleemaha hoose. Waraabinta waa mid dhexdhexaad ah, 2 asbuuc kasta dhirta waxaa lagu quudin jiray xal aqueous of Bacriminta iyo potash Bacriminta. Mulching ayaa kaa caawin doona xakamaynta cawska.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida iyo sida loo bacrimiyo yaanyada:
Ururada dabiiciga ah iyo tan macdanta ah, diyaariya-sameynta, TOP ugu fiican.
Wixii geedo, marka qaadashada, foliar.
Miyirka, iodine, ash, hydrogen peroxide, ammonia, boric acid.
In kasta oo ay yaraadeen, yaanyada waxay u adkaystaan ​​cudurada ugu waaweyn ee habeenkii. Dhaqtarku ma saameynayo dabaylo goor dambe ah, Fusarium, laakiin waxay noqon kartaa mid maskaxeed u nugul. Si looga hortago cudurrada viral carrada waa la calcined.
Marka laga beerto dhul furan, waxaa lagu talinayaa in la doorto sariiro halka beed ama cagaarka basbaaska koray. Waa in ay ka fogaato meelaha qabsaday basbaaska, eggplant, baradhada, iyo sidoo kale noocyo kale oo yaanyo ah. Dhirta yaryar waxaa lagula talinayaa in la buufiyo wakhti ka dib iyaga oo leh xal daciif ah ee kaneecada, phytosporin ama waxyaabo kale oo aan sun aheyn.
Marka lagu jiro guriga iyo lagu koriyo, yaanyada ayaa saameeya aphids ama caarada caarada. Daaweynta sunta cayayaanka ayaa kaa caawineysa in laga takhaluso cayayaanka, laakiin waxaa loo isticmaali karaa uun ka hor inta aan la dubin. Si dhirta looga ilaaliyo slugs, waxaad si joogto ah ugu xoqin kartaa xal aqueous of ammonia.
Akhri boggayaga internetka: Sidee loola tacaali karaa cudurada yaanyada ee lagu koriyo? Waa maxay noocyadu u adkeeysanayaan dhaleeceynta goor dambe iyo waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan difaacdan cudurkan?
Alternaria, fusarium, verticillis, dabaylo goor dambe ayaa ah cadawga ugu weyn ee habeenkii. Ma jiraan noocyo leh difaaca wanaagsan iyo wax-soosaarka sare?
Xilliga Casriga ee Sahara - doorasho weyn ee loogu jecel yahay tijaabooyinka beerta. Dhalooyinka yaryar waxay qurxin doonaan beerta ama dabaq kasta, daryeel taxadar leh ayaa gacan ka geysanaya in si weyn loo kordhiyo dhalidda.